Qarax Miino oo lala Eegtay Gaari Ay Saarnaayeen Ciidanka Dawlada oo Ka Dhacay Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Qarax Miino oo lala Eegtay Gaari Ay Saarnaayeen Ciidanka Dawlada oo Ka Dhacay Muqdisho
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya nawaaxiga Haanta Dheer ee Degmada Dayniile, qarax miino ayaa goor dhaw waxaa lala eegtay gaari ciidan ay la socdeen.
Qaraxan ayaa wuxuu qabsaday gaari Cabdi bile ah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan Militariga Somaliya, waxaana ka dhashay khasaare dhaawacyo ah oo soo gaaray ciidamada.
Inta la xaqiijiyay saddex askari oo ka tirsan ciidamada Xoogga dalka Somaliya ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi, lama soo sheegin wax dhimasho ah oo qaraxa ka dhashay.
Wararka waxa ay sheegayaan miinada oo ku aasneyd laamiga dhinaceeda in gaarigaan oo xawaare dheereeya ku socda lala eegtay.
Jugta qaraxa ayaa si aad ah looga maqlay dhanka Koonfureed ee Magaalada Muqdisho.
Ciidamadii qaraxa ku dhaawacmay ayaa loo qaaday Isbitaalka Madiina ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibaayo.
Qaraxyada miinada ah ee wadooyinka Muqdisho lagu aaso, ayaa ku soo badanaayo,aalmahaan danbe magaalada muqdish.
Shariif Xasan oo magacaabay Guddoomiyaha Maxkamada Sare Koonfur Galbeed Soomaaliya
SOMA Ayaa ugu Baaqday Maamulka Galmudug in Lasiidaayo Wariyo Hanad Cabdi Faarax.